SOOMAALIYA – OLOLAHA TALAALKA DAYNIILE OO LOO JOOJIYEY DAGAALADA AAWADOOD - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Muqdisho, Oktoobar 22, 2011
Ka dib markii dagaal culus uu 20kii Oktoobar ka qarxay Dayniile, oo ku taalla daafaha magaalada Muqdisho, ayaa Ururka Dhakhaatiirta
aan Xuduudda Lahayn /Médecins Sans Frontières (MSF) uu ku khasbanaadey in uu joojiyo ololihii tallaalka jadeecada ee uu degaanka ka wadey. Ololaha ayaa la qorsheeyey in uu socdo muddo saddex toddobaad ah iyo in lagu gaaro 35,000 carruur ah. Cudurka jadeecada ayaa hadda faro kulul ku haya Soomaaliya,” ayuu yiri Duncan McLean, oo ah Madaxa barnaamijyada MSF ee Soomaaliya. “Tallaal oo keliya ayaa joojin kara faafidda cudurkan safmarka ah.”
Shantii maalmood ee ugu horreeysey ee tallaalka ayaa 4,831 carruur ah, oo ay da’doodu u dhaxayso lix bilood ilaa 15 sano jir lagu tallaaley xaafado kala duwan oo Dayniile ka tirsan. Laakiin iskudhacyadii dhex marey ciidamada Dowladda Federaalka Ku-meelgaarka ah, oo taageero ka helaya AMISOM (Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya), iyo kuwa Al Shabaab, ayaa joojiyey tallaalka.
“Intiiba aan xaaladda ammaanka laga dhigin mid deggan, suuragal ma ahaaneyso in dib loo bilaabo ololaha tallaalka,” ayuu sheegey McLean. ”Waxaana marka xaaladdu ay degto, aan ku khasbanaaneynaa in aan dib uga fekerno istiraatiijiyaddeena sababta oo ah dad badan ayaa ka cararey goobaha dagaalka. Kumanaan qof oo dad barokacayaal ah ayaa ku noolaa xerooyinka Dayniile, qaar badan oo ka mid ah waxaa ay halkaa ku noolaayeen muddo dheer qaarna dhowaan ayaa ay ka yimaadeen gobollada ay abaartu saameysey.”
Intaa waxaa dheer, dad badan ayaa dhaawacmey intii ay iskudhacyadu socdeen. 20kii Oktoobar iyo maalintii ka dambeysey, kooxaha MSF
ee Cusbitaalka Dayniile waxaa ay qaabileen 83 bukaan oo qaba dhaawacyo xabbadeed ama kuwo qarax ka soo gaarey. Afartan iyo kow bukaan ayaa cusbitaalka la dhigey oo toban iyo kowna qalliin ayaana la sameeyey.
MSF waxaa ay taageereysey maaareynta xaaladaha degdegga ah ee cusbitaalka Dayniile laga so bilaabo bishii Agoosto 2007dii. Laga
soo bilaabo bishii Abriil ee la soo dhaafey, MSF waxaa ay sidoo kale taageero ka geysaneysaa daaweynta nafaqo-xumada ba’an. Labaatan iyo afar carruur ay nafaqo-xumo hayso ah ayaa ay u socotey daaweyn xooggan ka hor intii aanu dagaalku qarxin. Inta badan marka ay dagaalladu dhacaan, hooyooyin argagaxsan ayaa doorta in ay la baxaan carruurtooda; keliya lix ka mid ah carruurtaa ayaa weli la daryeelayaa.
MSF waxaa ay sii waddaa in ay ka shaqeyso cusbitaalka Dayniile iyo Muqdishoba, halkaas oo kooxaheennu ay gargaar caafimaad iyo mid nafaqo ku siiyaan dadka barokacayaasha ah.
MSF waxaa ay si joogto ah uga shaqeyneysey Soomaaliya tan iyo 1991gii waxaana ay hadda dalka ka waddaa 13 mashruuc, kuwaas oo ay ka mid yihiin hawlo caafimaad oo la xiriira xaaladda degdegga ah ee haddaj irta, waxqabyo tallaal iyo kuwo nafaqo. Dhadhaab oo Kenya ka tirsan, ayaa MSF ay hawlaheeda dib uga bilowdey 2009kii, iyada oo sidoo kale gargaar siineysa qaxootiga Soomaalida ah
ee ku nool xerooyinka Doolow Addo, Itoobiya
Tags: Banadir, Daynile, Daynile hospital, IDP, Mogadishu, MSF, Somalia, Victims of Violence